Cadaadiska Shiinaha ee Soo-dejinta iyo Dhoofinta (Canton Fair) Warshad Websaydh oo Soo Saara Websaydh warsameyaasha iyo iibiyaasha | Kooxda Huaihai Holding Group
Bandhiga Soo Dejinta iyo Dhoofinta Shiinaha (Canton Fair) Websaydhka Iibiyeyaasha Rasmiga Ah Ee Websaydhka
Shirkadeena, Kooxda Huaihai Holding Group waa soo saare hormuud ah gudaha warshadaha gawaarida mini, 44-kii sano ee la soo dhaafay waxaan sii wadaynaa bixinta xalka safarka dadka da 'kaladuwan, fasallo iyo quruumo kala duwan. Oo wakhti dheer ka hor, waxaan daryeelaynaa sida looga dhigo mid dadka waayeelka ah looga kaxeeyo meel aamin ah oo raaxo leh. Taasina waa mowdkeena maanta.
Maalmahan dadka da'da ah waxay ku noqdeen dhibaato weyn adduunka oo dhan. Sida lagu xusay baaritaan internet laga sameeyay, illaa sanadka 2018, dadka da'doodu ka weyn tahay 65 sano waa 8.5% tirada guud ee adduunka. Waxaana la rajeynayaa in sanadka 2050, tiradan ay ku badato 17%. Yurub dhexdeeda iyoWaqooyiga Ameerika, waxaa jiri doona in kabadan 25% tirada dadka ka weyn 65 sano jir, waxay la macno tahay afartii qof ee aad la kulmi karto hal “qof gaboobay”.ListCanton Fair khadka tooska ah
Dadka da'da ah ayaa beddelay nolosheena maalinlaha ah waxayna u keenaan dhibaatooyin fara badan oo la xiriira. Wadamo badan, Liisanka wadista gawaarida waa la kansalayaa dadka ka weyn 65 sano hadii aysan dhaafin imtixaanka sanadlaha ah. Sidoo kale waa u khatar dadka waayeelka ah inay kaxeeyaan mootada ama mootada Korontada wadada, oo ku saabsan gaadiidka dadweynaha inta badan kuma habboona gebi ahaanba. Markaa waa madax xanuun dadka da'da ahi inay baxaan. Salkaas, waxaan rabnaa rajo ah inaan soo bandhigno xalalkayaga. Waxaan kula talinaynaa dadka waayeelka ah inay kaxeeyaan tricycle-ka korantada si ay u xalliyaan dhibaatooyinka safarkooda. Aniga oo dhinac ag ah ayaa ah mid ka mid ah moodooyinka noo soo muuqday, waxaan sameyn karnaa muuqaal.Canton Fair Buyer
Sababta tricycle korontoku habboon yahay dadka da'da ah? Waxaan u maleynayaa inay jiraan ugu yaraan 3 sababood oo waaweyn. Marka hore,tricycle waa aamin. Qaab dhismeedka wuu ka xasilloon yahay 2 giraangirood, waxaanan u dejinay xawaaraha ugu sarreeya 25 km / saac, kaas oo aan si dhakhso ah u dhakhso badan laakiin u wanaagsan dadka da'da ah. Marka labaad, tricycle-ka wuu ka raaxo badan yahay wadista gaariga. Waxaan u isticmaalnaa barkinta ugu tayada sareysa kursiga darawalka iyo kursiga rakaabka. Ma fududa inaad dareento daal xitaa baabuur wadista saacado. Marka seddexaad, tricycle-kan wuxuu leeyahay cabir yar, waa 8 fuudh dherer ah, 3.4 fiin. Waad jeclaan doontaa markaad baabuur ku dhex wado wado dadku ku badan yihiin.Bandhigga Canton Online
Sida aan ognahay, Moodku waa udub-dhexaadka gaari. Tantricycle wuxuu ku qalabeysan yahay 60V1000W matoor, waxaan adeegsanaa safka koowaad, wuxuu leeyahay wax qabad firfircoon bilaw ah, jawaab dhaqso leh oo firfircoon, awood xad dhaaf ah, buuq hooseeya, howl gal siman, nolosha adeegga oo dheer. Awooddeeda ugu sarreysa waxay gaartaa 2200W, iyadoo la siinayo xawaaraha ugu sarreeya 30km / saacaddii, taasi waa ku filan tahay waayeelka inay kaxeeyaan.
Qaybta labaad ee muhiimka ah waa xakameeyaha, maamuleheena wuxuu leeyahay hufnaan heer sare ah, majiro bilow, awood xad dhaaf ah, ilaalin yar yar. Waxay leedahay shaqo is-hubin: is-hubinta firfircoon iyo is-hubinta hal-abuurka ah. Ilaa iyo inta kooneyuhu ku sugan yahay awooda korantada, wuxuu si otomaatig ah u ogaan doonaa gobolka interface ee laxiriira, sida wareejinta gacanta, biriiga korantada ama wareegga kale ee dibedda, iwm. nabadgelyada raacitaanka.
Midda saddexaad waa xarka dambe, waxaan dooranaa nidaamka tayada qaran ee tayada bixinta ee dib u soo nooleynta, iyo hanaanka kuleylka heer-kulka-sare ayaa loo adeegsadaa badhiska. Qiyaasta P5-da waxay xaqiijineysaa xasilloonida tayada nidaamka gudbinta ee aan annaga u sameysannay, tuubbada falo:φ56mm, dhumucdiisu waa 3.5mm.Canton Fair Buyer